CNC Series Factory - China CNC Series Abenzi, abahlinzeki
I-Multifunction ZNC Sinker EDM Machine 580mm Max Distance For Processing Processing
Imodeli: Ukuhamba Kwethebula le-CNC540: 500 * 400 * 200mm Uhlobo Lwemodeli: I-CNC EDM Usayizi Womshini Wesitsha Samafutha: 1300 * 720 * 450mm Usayizi Wethebula: 800 * 400mm Max. Umthwalo We-Eletrode Head: 150kgs Precision Spark Erosion ZNC CNC EDM Die Sinking Machine for mold mold CNC CNC 540 1.Various machining izindlela ezingahambelana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. Umsebenzi omuhle we-2.Bottom - Lapho imishini ifinyelela ekujuleni okufisayo, izosebenzela ngokuqhubekayo inqubo enhle yemishini. 3. Ikhompiyutha ezenzakalelayo, i-mesh ne-adjustme ...
700 * 400mm Ithebula Usayizi CNC EDM Machine, Ukuzinza CNC Sinker EDM Machine CNC450
I-Electrode Head: 280mm Model: CNC450 Table Travel: 450 * 350 * 200mm Color: Optional Model Type: CNC EDM Size Of Oil Container: 1100 * 710 * 450 quality Stable and reliable quality ZNC540 electric discharge machine for mold mold processing 1.Stability and reliable quality zokucubungula isikhunta. I-1.Isikhundla esiphakeme se-accuarcy: esifanele kakhulu izingxenye zemishini ezifana nokufa, ukubhola noma isidina 3. Isilawuli somkhiqizo esidumile saseTaiwan, esinokwethenjelwa nokunemba. Ububanzi obubanzi besicelo: imishini, isidina, umthwalo ophakathi nendawo ...
Ukuzinza Okuphezulu kwe-CNC EDM Machine, i-650L Hlunga Isitsha Cude EDM Spark Machine
Imodeli: I-CNC1680N Ithebula Lokuhamba: 1600 * 800 * 500mm Usayizi Wesiqukathi Sikawoyela: 2550 * 1500 * 560mm Usayizi Wethebula: 1700 * 1000mm Max. Umthwalo we-Eletrode Head: 400kgs Isisindo: 9000kg 1000 * 600 * 450mm etafuleni lokuhamba i-CNC EDM umshini wokulungisa isikhunta i-CNC 1060N 1.Ukulungisa ukwakhiwa kwezindlu zangaphakathi ze-servo, usebenzisa i-PCB design yempilo enwetshiwe, ukusebenza okuphephile nokugcinwa okulula. 2. Yamukela i-electrocircuit ye-MOSFET, ngokucubungula ngejubane eliphezulu, kanye nokulahleka okuphansi kwe-electrode 3. I-PC engavumelani nomfutho ...